Fifidianana loholona : vitavita ho azy ny fanitsakitsahan’ny HVM ny latsabato | NewsMada
Fifidianana loholona : vitavita ho azy ny fanitsakitsahan’ny HVM ny latsabato
Nalaza ratsy tamin’ny fifidianana loholona ny fanitsakitsahan’ny HVM ny latsa-bato. Hisy fitsarana ihany sa ho vitavita ho azy?
“Nangatahanay ny fampiakarana ny biletà hijerena azy. Rehefa nojerena tokoa izany, misy marika tsy fanao fa lasa hita izay nifidy. Izay no nahatonga ny didim-pitsarana hoe nisy ny nampiasa ny litera amin’ny abidia: Ranona nisy A, Ranona nifidy B, Ranona nifidy D… Izay no nanafoanana azy.”
Fanazavan’ny filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC), Rakotoarisoa Jean-Eric, io, taorian’ ny fanambarana ny vokatra ofisialin’ny fifidianana loholona teny Ambohidahy, ny 22 janoary, io. Niaiky ny fisian’ny fanitsakitsahana ny tsiambaratelon’ny latsabato ny HCC.
Rehefa avoaka ny biletà, fantatra hoe tena nifidy ny kandidà izao tokoa ny mpifidy izatsy. Misy koa ny karazan-tsary. Tsy misy olana izany, raha jerena amin’ny biraom-pifidianana iray. Rehefa jerena miaraka amin’ny distrika izany: miverimberina ilay sary… “Nisy toromarika izany tany ambadika tany”, hoy izy.
Amin’ny ankapobeny, tena betsaka nofoanana ny vato tany Toliara: eo amin’ny 350 eo. Matetika, ny an-dry zareo HVM no foana, araka ny fanazavany. Tsy nampiova ny vokatra farany izany, satria mifanelanelana be : 1 000 ny voalohany, 100 ny manaraka.
Vaky bantsilana ny raharaha
Ho vitavita ho azy amin’ny fanafoanana vato fotsiny ve ny fanitsakitsahan’ny HVM izay tsiambaratelon’ny fifidianana izay? Mazava izao: tao ambadiky ny fanaovana birao fandatsaham-bato isaky ny kaominina izay fanaovana sary manokana izay, efa notsipahin’ny maro: kandidà, mpifidy…
Vitsy ny mpifidy vaventy isaky ny kaominina. Mora ny nanery sy nanome famantarana manokana amin’izany, raha tena nifidy izay nanambazana vola tokoa izy ireo na tsia? Nefa vitavita ho azy amin’ny fanafoanana vato izany, tsy nanova inona raha jerena, ohatra, ny tany amin’ny faritany Toliara.
“Mila amboarina koa ny kolontsaina momba ny fifidianana aty amintsika: hangala-bato ve no atao an-tsaina rehefa hanao fifidianana?” hoy ny filohan’ny HCC. Tsy izany ve no nafitsoky ny HVM tamin’ny fifidianana loholona iny? Mba hisy ve ny fampiakarana ny raharaha any amin’ny fitsarana?